Ivan Savvidis ioo garoonka ku dhex socda 11-ki March, 2018.
Kooxdiisa Salonika ayaa sidoo kale la dul dhigay ganaax ah in laga xayuubiyay saddex dhibcood taasoo soo gaba gabeysay rajadi ay ka laheyd hanashada horyaalka Giriisga.
Savvidis, oo ah ganacsade asal ahaan kasoo jeeda dalka Georgia, ayaa isaga oo ordaya bistooladna ku hubyesan galay garoonka, kadib marki kooxdiisa laga diiday gool ay ka dhalisay kooxda AEK Athens oo ay ku loolamayaan horyaalka Giriiga ee xilli ciyaareedkan. Dhacdadan ayaa dhacday 11-ki bishii March.
Arintaasi waxay keentay in la joojiyo dhamaan ciyaarihi kubada cakta ee dalka Giriiga, kadib marki uu xiriirka kubada cagta aduunka ee FIFA uu walaac ka muujiyay amniga garoomada kubada cakta ee dalkaasi.
Talaadadi ayay dowlada Giriiga qaadday xayiraadi saarneyd ciyaaraha kubada cakta ee dalkaasi, waxaana lagu wadaa in horyaalka Super Liiga Giriiga uu dib u bilowdo dhamaadka todobaadkan.